Maitiro ekudzoreredza pasina kurasikirwa neJailbreak | IPhone nhau
Maitiro ekudzoreredza pasina kurasikirwa neJailbreak
Kunyangwe paine chokwadi chekuti kubvira Pangu naTaiG pavakapinda muchiitiko, Jailbreak yabva pakuva chimwe chinhu chaishomeka kuva neinenge yega yega vhezheni yeIOS inotangwa neApple, zvakajairika kuzviwana tiri mumamiriro ezvinhu seaya izvozvi : iyo chete vhezheni iyo inogona kuiswa pane edu zvishandiso haina njodzi kune jailbreak. Izvi zvinoreva kuti kana isu takakundikana zvakakomba kana isu tichingoda kudzoreredza mudziyo wedu nekuti yatononoka kana kusagadzikana, tinofanirwa kuisa vhezheni yeIOS iyo inotidzivirira kubva kujeri, izvo zvisingafungidzike kune avo vanoda kuve neCydia yakaiswa pamidziyo yavo.
Asi izvi zvine mhinduro, uye isu tine mikana yakati wandei yekusarasa mukana wekuputsika kwejeri kunyangwe tikadzoreredza mudziyo. Iwe unoda kusiya yako iPhone kana iPad seyatsva kubva kufekitori asi iwe uchida kuchengeta Cydia kana zvirinani mukana wekuiisa? Zvakanaka, tinokupa mhinduro kuminamato yako zvakadzama pazasi, uye tinozviita nenzira nhatu dzakasiyana.
Yangu yekutanga sarudzo nezvikonzero zvinoverengeka. Chekutanga chavo, nekuti muumbi waro ndiSaurik pachake, chinova chisimbiso chinenge chakazara. Yechipiri, nekuti inosiya mudziyo wakachena, wakadzoreredzwa sekunge iwe uchangobva kuiburitsa mubhokisi, asi uchichengeta iyo imwechete vhezheni yawaive nayo. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uine iOS 8.4 neJailbreak mushure mekushandisa Cydia Impactor unenge uine iOS 8.4 yakachena, isina Cydia, asi sezvo iro vhezheni iri panjodzi yeJailbreak iwe unofanirwa kungozviita uye uchave neCydia zvakare. Chikonzero chechitatu nei ndichichifarira pamusoro pevamwe ndechekuti zvinoitwa kubva pachigadzirwa chaicho. Iwe unongofanirwa kuisa Cydia Impactor kubva kuCydia, vhura iyo wobva wadzvanya pa "Delete rese data uye unjailbreak kifaa", iwo matsvuku mavara anoonekwa pazasi. Inoenderana nechero vhezheni pakati peIOS 8.1 na8.4. Une rumwe ruzivo nezve ichi chishandiso mu Iyi link.
Yangu yechipiri sarudzo ichave SemiRestore. Anwendung inowanikwa yeWindows, Mac OS X uye Linux uye izvo zvinosiya chishandiso chako chakachena asi neCydia yakaiswa, ndiko kuti, neJailbreak yaitwa, uyezve, uchichengeta iyo vhezheni yawakamboisa kare. Inoshandiswa kubva pakombuta yako (unogona kurodha pasi application kubva ichi chinongedzo chepamutemo) uye inovandudzwa kuti ienderane kubva kuIOS 5 kuenda kuIOS 8.4. Nei isiriyo sarudzo yangu yekutanga? Icho chokwadi chekuti hachidzorere chako chishandiso asi chingobvisa mafaera zvinoreva kuti chinogona kusiya zvimwe zvakasara, uye kuti chinofanirwa kushandiswa kubva pakombuta zvakare chinetso kana ichienzaniswa neCydia Impactor. Une ruzivo rwese mu Iyi link.
Yangu yekupedzisira imwe nzira ingave iLEX RAT. Saizvozvo Ini handikurudzire kushandiswa kwayo nekuti haina kuvandudzwa kwemwedzi, uye kunyangwe ruzivo rwechizvino-zvino ruchisimbisa kuti runowirirana neIOS 8.xx handina data rekusimbisa kuti rinoenderana neshanduro dzazvino dzeIOS 8. Ini ndinozvisanganisira chete nekuti ndiyo yakatanga kuoneka, uye nekuti mugadziri wayo rimwe zuva angaivandudza kuti ienderane neshanduro dzichangoburwa dzeIOS. Mashandiro ayo akafanana chaizvo neSemiRestore, ndiko kuti, inosiya chishandiso chako chakachena asi neCydia yakaiswa, asi zvine mukana wekuti inogona kushandiswa kubva pane chako chishandiso, sezvo iri application inotorwa kubva kuCydia. Iwe une rumwe ruzivo mu Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Maitiro ekudzoreredza pasina kurasikirwa neJailbreak
iMods, iyo nzira yeCydia, padyo uye padyo
Veho 360 M6 mutauri wongororo ine retro dhizaini